လက်ရှိတွင် ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန် အပတ်တကုတ် အားထုတ်နေဆဲ ကာလဖြစ်သည့်အတွက် တိုင်းရင်းသား လူ?? - Yangon Media Group
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ၏အခြေအနေသည် ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန် အပတ်တကုတ်အားထုတ်နေဆဲ ကာလဖြစ်သည့်အတွက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအနေဖြင့် အမြော်အမြင်ကြီးကြီးထားရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖေ ဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် ပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနားတွင် ပြောကြားလိုက်သည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တွင် ပြုလုပ်သည့် (၇၁) နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနားတွင် သဘာပတိအဖြစ် မိန့်ခွန်း ပြောကြားစဉ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဥာဏ်ဝင်းက ယင်းကဲ့သို့ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ”ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန် အပတ်တကုတ် အားထုတ်နေဆဲကာလဖြစ်သည့်အတွက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေ အနေနဲ့ အမြော်အမြင်ကြီးကြီးထား ရှိရပါမယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်းညီညွတ်မှရမယ်။ ဘယ်လိုညီညွတ်ရမလဲဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ထားရှိတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ။ အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုရောက်အောင် ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ။ ဒါကိုအဓိကထားရမှာ။ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုတာ ငြိမ်းချမ်း ရေးရပြီးတဲ့အခါမှ ရှင်းရမယ့်ကိစ္စ တွေလည်း ရှိပါတယ်”ဟု အမျိုး သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဥာဏ်ဝင်းက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဖေ ဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်က ပြောသည်။
ယင်းအပြင် စည်ပင်ဖွံ့ဖြိုးသည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာရန်အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိမှုသည်များစွာအရေးပါသည်ဟု ဦးဥာဏ်ဝင်း ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ ”ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က ငြိမ်းချမ်းရေးကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေရတဲ့အဆင့်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဦးတည်တဲ့ လမ်း ကြောင်းတွေကို အမြော်အမြင်ကြီးကြီး၊ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ကြိုးစားနေရတယ်။ နိုင်ငံစည်ပင်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုရင် နံပါတ်တစ်က ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့လိုတယ်။ ဒီငြိမ်းချမ်းရေးရပြီးမှပဲ အ ရေးကြီးဆုံးက ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်း ရင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေကြားမှာ ဘယ်ကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ မူဝါဒအရ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ လူမှုရေးအဖြေကို ရအောင်ကြိုးစားရမယ်”ဟု အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် ပြောကြားသည်။ (၇၁)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနားကို ဗဟန်းမြို့ နယ်ရှိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ရုံးတွင် နံနက် ၁ဝ နာရီခန့်က ကျင်းပခဲ့ပြီး နာယကဦးတင်ဦးနှင့်ဇနီး၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဝင် ဦးဥာဏ်ဝင်း၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအပါအဝင်သံရုံးမှ အရာရှိများ၊ ပါတီဝင်လူငယ်များ နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းတို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အစိုးရတစ်ရပ်ဖြစ်လာလျှင် ယခင်အစိုးရအဆက်ဆက်၏ ကောင်းမွေဆိုးမွေကို ခံရမည်ဖြစ်ပြီး ယခင်အစိုး??